Miseho amin’ny endriny maro ny herisetra, izay mahazo vahana amina Firenena maro maneran-tany. 30 novembre 2020
“Tsy maintsy hihoarana ny sakana rehetra hanenjehana ny mpanao ratsy rehefa voamarina sy voaporofo ny vesatra anenjehana ny voampanga”, hoy hatrany ny teo anivon’ny CPI. Nohamafisin’ny Tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ity Fitsarana iraisam-pirenena ity fa mila fongorina ny ady amin’ny herisetra amin’izao taon-jato iainatsika izao. Hisy ny paikady hapetraka hanatratrarana izany toy ny fampiasana ny antontan-kevitra voatahiry ary hisy ihany koa ny famolavolana politika ankapobeny mirakitra ny heloka ara-pananahana sy ny politika ankapobeny momba ny ankizy. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho famongorana ny herisetra no nanambaran’ny teo anivon’ny Fitsarana iraisam-pirenena momba ny heloka bevava an’ireo rehetra ireo.
Miady mafy i Madagasikara
Raha ny tranga eto Madagasikara manokana dia tena mirongatra izaitsizy ny trangana herisetra. Ny fanolanana zaza tsy manan-tsiny no tena nahazo vahana tato anatin’ny telo herinandro nifanesy izay. Anisan’ireo Firenena nankalaza ny andro maneran-tany ho famongorana ny herisetra i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny hetsika nataon’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina tany Atsimo. Ankilany, ny hery velona rehetra eto amin’ny Firenena dia tsy hitsitsy ny fampiharana ny sazy amin’izay tra-tehaka ka voaporofo tokoa fa tena nanao herisetra.